Sa farada dalxii syada iyo fasalka – Bildung und Teilhabe
Ka qeybqaadashada bulshada iyo dhaqanka
Tan iyo 2011, Leistungen für Bildung und Teilhabe (faa’idooyinka waxbarashada iyo ka qeybqaadashada) waxaa loo tixgeliyay carruurta, dhalaanka dadka weyn oo yar intaa waxaa dheer shuruudahooda bil-laha joogtada ah. Kani waxaa ku jira qaabilaada qarashaadka dalxiisyo halmaalin ama dhoor maalmood iyo dugsiga xanaanada ama dugsiga (tusaale. safarada dugsiga).
Aanan helin wax kaalmada tababarka ah,
Heshay faa’idada sida waafaqsan Buugga II ee Sozialgesetzbuch (SGB II), Buugga XII Sozialgesetzbuch (SGB XII – Xeerka Caymiska
Bulshada Jarmalka) ama Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG – Sharciga Faa’idada Magangalya Doonka), faa’idooyinka guriyeynta
(Wohngeld) ama faa’idooyinka carruurta (Kinderzuschlag).
Taas oo qarashaadkeeda la qaabili karo?
Qarashaadka waa la qaabilaa
Dhammaan dugsiga halka maalin ah iyo dalxiisyada dugsiga xanaanada oo ka dhaco muddo la ansixiyay
Oo tallooyin dhoor maalmood ah ee dugsiga ka bilaabanayo – baaxada bixinada waxbarashada dhexdheeda – iyo si la mid ah
safarada dugsiga xanaanada (Kiga), laakin ma ahan safarada crèche (Hort).
Dalxiisyo hal maalin ah
Haddii safar hal maalin/ safarka goobta la qorsheeyo, kadib waxaad warqad ka heleysaa dugsiga ama dugsiga xanaanada. Warqadaan waxay sheegeysaa goobta iyo taariiqda safarka, iyo tirada ah in aad ka bixisid canugaaga si uu uga qeybqaato safarka.
Waxaad codsan kartaa Pro Arbeit oo qarashaadka la bixinayo safarka. Si middaan loo sameeyo, si sahlan u qaad MACH MIT : : Ausflüge & Klassenfahrten (Dalxiisyada iyo safarada dugsiga) : : foomka “Komm – Mach mit” buuga-jeega, la dhameystiray bogga hore ee codsiga, ku soo lifaaq warqada waalidka oo ku soo dir wax walba Pro Arbeit. Maamulahaaga ayaa eegayo codsiga oo ku wareejinayo lacagta akoonkaaga haddii la ansixiyo.
Safarada todobada maalmood
Haddii canugaaga rabo in uu ka qeybqaato safarka dhoorka maalmood ah ee habeen dhaxa leh ee fasalkooda ama dugsiga xanaanada, kadib safar iyo qarashaadka hoyga way kordheysaa. Codsiga qarashaadka ee isticmaaladaan ee la qaabilayo waa in la gudbiya waqtiga ka hor ee bilowga safarka. Si middaan loo sameeyo, si sahlan u qaad MACH MIT : : Ausflüge & Klassenfahrten (Dalxiisyada iyo safarada dugsiga) : : foomka “Komm – Mach mit” jeega-buuga, iyo buuxi bogga koowaad ee codsiga. Weydii
dugsiga iyo dugsiga xanaanada in aad buuxiso dhinaca gadaal ee codsiga. U soo dir foomka oo dhameystiran Pro Arbeit. Maamulahaaga ayaa eegayo codsiga iyo, haddii la ansixiyo, waxaa si toos ah lacagta loogu wareejinayaa dugsiga la sheegay, fasalka, akoonka macalinka iwm.
Qarashaadkee ayaan la bixin karin?
Lacagta jeebka ee isticmaalada dheeraadka ah inta lagu jiro dalxiiska.
Qarashaadka ee sheeyada isticmaalka (tusaale. boorsada safarka ama dharka qubeyska) - xitaa haddii lagu sheego liiska baakida.